यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि पिस्ता खानुका फाइदाहरू, जानी राखौ
स्वास्थ्यको लागि पिस्ता खानुका फाइदाहरू
अगस्ट 1, 2019 अगस्ट 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments डा. राम बहादुर बोहरा, पिस्ता, स्वास्थ्य
पिस्ता सवैभन्दा मलाई मनपर्ने फ्रुट अन्तर्गत पर्दछ । पिस्ता १०० ग्राममा १९.३ ग्राम प्रोटिन, १४ मिलिग्राम आइरन र १४० मिलिग्राम क्याल्सियम हुने गर्छ । पिस्तामा मासुले प्रदान गर्ने शक्ति प्रदान गर्नुका साथै हरियो सागसब्जीमा जस्तै पिस्तामा पनि प्रशस्त प्रोटिनको मात्रा पाइने हुँदा यसलाई माछा मासुको सट्टामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसको नियमित सेवनले शाकाहारी तथा मासाहारी दुबै थरीका मानिसहरुलाई फाइदा पुर्याउने गरेको हुन्छ । पिस्ताको स्वास्थ्य फाइदाहरू एक स्वस्थ हृदय, वजन व्यवस्थापन, मधुमेह र उच्च रक्तचापमा समेत यसले राम्रो फाइदा दिने गरेको छ । पिस्तामा पाइने भिटामिन, खनिज, वसा र प्रोटीन स्वास्थ्यको लागि सबै राम्रो छन् ।
यसको नियमित सेवनले शरीरमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रालाई नियन्त्रित राखेर रगतमा भएको चिनीको स्तरलाई घटाउने गर्छ । पिस्तामा उपलब्ध भएको फेनोलीक भन्ने तत्वले शरीरमा विषादी नाशकको काम गर्छ । विषादीनाशक गुणले शरीरमा तनाव उत्पन्न हुन दिदैन जसका कारण क्यान्सर तथा मुटु रोगले हामीलाई छुन पनि सक्दैन । दिनहुँ पिस्ता खानाले फोक्सो र क्यान्सर हुने सम्भावना न्यून रहन्छ ।
पिस्ताले शरीरमा ब्लड लिपिडको स्तरलाई समेत सन्तुलितमा राख्छ । पिस्तामा पाइने आइरनले स्वास प्रक्रियालाई सक्रिय गरेर शरीरमा ऊर्जा दिनुका साथै रक्तकोषिका निर्माणमा समेत मद्दत पुर्याउछ । नियमित रुपमा पिस्ता खानाले कोलेस्टेरोल, उक्त रक्तचाप तथा विभिन्न मुटु सम्बन्धि समस्याबाट हामीलाई टाढा राख्ने गर्छ । यसको सेवनले मुटुको धड्कनलाई नियमित बनाउनुका साथै आँखाको ज्योतिलाई बलियो बनाउन् समेत सहयोग गर्छ ।
यसको सेवनले छालालाई घामको युभी किरणले गरेको ड्यामेजबाट सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै छालाको क्यान्सर तथा उमेरअघि नै देखिने चाउरीपन जस्ता समस्याबाट राहत दिन्छ । यसको नियमित सेवनले हाम्रो मस्तिष्क तेज हुनुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ । स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने चाहना भएमा पिस्ता खाने गर्नुहोस् ।
← पेटको बोसो घटाउने घरेलु सरल उपायहरु
जान्नैपर्ने कुरा, खाना कसरी खाने ? →
जोर्नी दुख्ने रोग र उपचार
अगस्ट 29, 2018 अगस्ट 29, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
चलिआएका परम्परा नमासौं
फ्रेवुअरी 13, 2019 फ्रेवुअरी 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
च्याउ र मानव स्वास्थ्य
डिसेम्बर 28, 2018 डिसेम्बर 28, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2